Abavelisi beewallet & abaThengi-fundi baseTshayina be wallet
I-Wallet ye-Wallet ye-Wallet yamadoda aMade aluhlaza
Yenziwe ngempahla ekumgangatho ophezulu kwaye inobuhlobo bendalo. Iphethini ye-litchi eethe-ethe ithambile, iyaphefumla, iziva intle kwaye inokucocwa ngendwangu emanzi.
I-Magnetic emfutshane i-wallet yamadoda imfutshane i-wallet eqhelekileyo
Yenziwe ngempahla ekumgangatho ophezulu ye-PU, uyilo lobungakanani obukhulu, ungabeka iifoto, amakhadi asebhanki, ii-banknothi, ii-banknotes, utshintsho olukhululekileyo, njl njl.
Ladies wallet enkulu umthamo iqokobhe uhlobo 2020 entsha yaseKorea mobile phone fashoni zipper wallet
Le wallet enkulu enomthamo omkhulu yenziwa ngomgangatho ophezulu, usempilweni kwaye ubumnandi ngokusingqongileyo. Isitayela sefashoni, imibala etyebileyo, ukungabikho kwamanzi, ubungqina bomswakama, ukuhlala ixesha elide, ukuziva okuhle kwesandla kwaye kungacocwa ngendwangu emanzi.
Amadoda amaqhosha amade amade amacandelo athi nkqo ukuya kuma kwicandelo 3 ukusongelwa kwamakhadi amaninzi isikhundla esinefashoni entsha
Umgangatho ophezulu kwaye ulungelelene nobume bendalo, ulusu olungenamanzi, ubumanzi-ubungqina, ukuphefumla, isikhwama esincinci esithandekayo, uzive ukhululekile, izipho zeshishini, isikhumbuzo sokuhamba, olona khetho luhle kakhulu lwezipho zepasika.
Amanenekazi amanqindi amade icandelo elikhulu umthamo ophindwe kabini wengubo yangaphantsi yeclutch yesikwati somfazi
I-Double-zip esebenzayo ye-clutch enobukhulu obukhulu yenziwa ngezinto ezikumgangatho ophezulu kunye nobume bemeko yePU. Amanzi angenawo amanzi, ubungqina bomswakama, obunesitayile, nembonakalo egqibeleleyo, imibala emininzi, ukuhlala ixesha elide, ukuziva ulungile, inokucocwa ngendwangu emanzi.
Abafazi abatsha i-clutch bag wallet ende elula imibala yokufakisha i-zipper wrist bag
Le wallet ethe nkqo yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu wobume bePU kunye nezinto ezenziwe ngombala ezenziwe ngesandla. Imilo ehambelana nemibala, imfashini enemibala eyahlukeneyo, umhombiso we-tassel yepeyinti, ukungangenwa kwamanzi, ubungqina bomswakama, omeleleyo nobomeleleyo, imilo epheleleyo iziva ilungile, inokucocwa ngendwangu emanzi.
Isikhwama samadoda esine-wallet ende esine-wallet yeshishini sefowuni eqhelekileyo
Yenziwe ngesikhumba esiphakamileyo esikumgangatho wobume bePU. Iziva intle kwaye inokucocwa ngendwangu emanzi. Amanzi angenakuphefumla, anokuphefumla, uthambile kwaye ugudile, umgangatho ophezulu wokuphela.
Abafazi abatsha i wallet clutch ibhegi yababhinqileyo icandelo leKorea zipper elingafaniyo umbala umbala onobuninzi bewallet enkulu yomnxeba
Le wallet enomthamo omkhulu kunye noyilo lwe-retro, olwenziwe ngomgangatho ophezulu, onobuhlobo bendalo kunye nesempilweni. Amanzi angenawo amanzi, ubungqina bomswakama, obunemfashini ngemibala eyahlukeneyo, ekhululekile ukuba uzive, umhle kwaye uqinile.
Isingxobo esitsha seshishini le-clutch handbag ende ye-zipper clutch ibhegi yokusebenza kwamadoda amaninzi
Ikhethwe ngononophelo oluphezulu ubume bendalo obuphantsi kwendalo. Ukuthamba okuthambileyo, imilo epheleleyo, kwaye inokucocwa ngendwangu emanzi.
Imfashini eNtsha yabasetyhini beWallet ende eVulekileyo
Yenziwe esemgangathweni ophezulu, esempilweni kwaye inobume bendalo kwesikhumba sePU. Umgangatho ogqwesileyo, ongenamanzi, ophefumulayo, ochukumisayo, kwaye unokucocwa ngendwangu emanzi.
I-Wallet eqhelekileyo yamadoda e-Wallet ende ye-Clutch I-Zipper I-Wallet yezandla ezininzi zesikhwama samadoda
Imfashini entsha ye-wallet-wallet ekumgangatho wamakhadi ama-3 zolutsha zipper ezithe tyaba zeshishini wallet
Uyilo olukhulu lomthwalo wesipaji lungahlala ngokufanelekileyo kwiimfuno zonke. Inendawo ezi-8 zokugcina amakhadi etyala, anokuhlangabezana neemfuno zeshishini lemihla ngemihla, ukuhamba nokuthenga.